စတိုင်ကျလှပစေဖို့ ဒီအချက်တွေကို လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ - Myanmar Textile & Garment Directory
Site is under maintenance!
Cotton & Fabric
-Choose Location- Ahlone Bahan Botahtaung Dawbon Dagon Dagon Seikkan East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Hmaw Bi Insein Kyeemyin Daing Kamayut Kyauktada Kyauk Tan Lanmadaw Latha Mingalardon Mingalar Taung Nyunt Mayangone North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Thingangyun Thaketa Than Lyin Tarmwe Yankin Aung Myay Thar Zan Amarapura Bamaw Chan Aye Thar Zan Chan Mya Tharsi Maha Aung Myay Pyigyi Tagon Pyin Oo Lwin Patheingyi Sagaing Thedaw Wundwin Monywa Shwe Bo Myit Nge
All Categories Bags Batik Bedroom Accessories Boiler & Steam System Boxes & Cartons Buttons Chemicals Children & Infants Wear Curtains Custom Clearing Agents Dyeing & Printing Textiles Dyes Dying and Finishing Machinery Embroidery Machines & Services Fabric Shops Fashion & Ladies Wear Fashion Design Training Fashion Designer Freight Forwarder Garment Factories Hat Shops Laundries Longyi Men's Wear Packing Equipment Sewing Classes Sewing Machines & Accessories Silk Wear Sports Wear Tailors Textile & Garment Accessories Textile & Garment Machinery Thingan Thread Traditional Wear Weaving Mills Yarn Zippers
စတိုင်ကျလှပစေဖို့ ဒီအချက်တွေကို လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ
မွေးရာပါ စတိုင်ကျလှပနေသူရယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး။စတိုင်ကျလှပသူတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ရင် လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် နည်လမ်းကောင်း တစ်ချို့ အကြံပြု
ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိရှိရင်းဆွဲ ပုံစံကို တကယ်ပြောင်းလဲပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အရောင်စုံ တောက်ပတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း (accessories)များကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပေးဖို့လိုပါတယ်။အ၀တ်ဗီဒိုထဲမှာ ပုံမှန်ဝတ်နေကျအရောင်တွေနဲ့ပဲထပ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်းမှာ အရောင်စုံအ၀တ်အစားတွေကို ၀ယ်ယူပေးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
Read: အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟာ ဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုတွေ ရွေးချယ်ကြပါတယ်
ဒီနေ့ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းမှာ ဘာတွေခေတ်စားနေတယ်။ဘယ်လိုအ၀တ်အစားတွေ နာမည်ကြီးနေလဲဆိုတာတွေကို ခဏမေ့ထားလိုက်ပါ။လူတိုင်းမှာ မတူတဲ့ခန္ဓာကိုယ် body shapes တွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နာမည်ကြီးနေတဲ့အ၀တ်အစား ဒီဇိုင်းဆိုတာထက် မိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အရာကိုသာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။အများစုဟာ သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ဖော်ထားတတ်ကြပါ တယ်။ဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကို အကြိုက်ဆုံးပါလဲ..?မိမိကိုယ်ပေါ်မှာ အကြိုက်ဆုံးအစိတ် အပိုင်းက ပခုံးဆိုရင် ပခုံးကို ဖော်လိုက်ပါ။ စကပ်အတိုဝတ်ပြီး ခြေထောက်ကို ပြဖို့မလိုပါဘူး။ပြတာတွေ အရမ်းများရင် အဓိက ကိုယ်ပြချင်တဲ့အရာကို သူများတွေ သတိထားမိတော့မှာ မဟုတ်လို့ပါ။
(၄)shopping ထွက်ချိန်မှာ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ထားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့
Shopping ထွက်ရင်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အ၀တ်အစား တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုပါတော့.ဒီဝတ်စုံလေးက ကြည့်လို့ကောင်း လိုက်တာ ဒါပေမယ့် ငါနဲ့လိုက်မှာမဟုတ်လောက်ပါဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးလုံးဝမ၀င်ပါနဲ့။စမ်းဝတ်ကြည့်ပါ။ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ အ၀တ်လဲခန်းထဲကိုဝင် စမ်းဝတ်ကြည့်ပြီးမှ လိုက်၊မလိုက်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
အ၀တ်အစားဗီဒိုထဲမှာ အရောင်စုံ ရှိလေ ကောင်းလေပါပဲ။ဒါကြောင့်အရောင်တွေကို ရှောင်တာမျိုး မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ ၀တ်နေကျအရောင်တွေကိုပဲ အထပ်ထပ်အခါခါ ၀တ်နေမယ့်အစား အရောင်စုံ ရွေးချယ်ဝယ်ယူ ၀တ်ဆင်ပေးပါလို့ အကြံပြုပါ ရစေ။
(၆)အသက်အရွယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်း ထည့်မစဉ်စားပါနဲ့
ငါ့အသက်ငါ့အရွယ်နဲ့ဒါမျိုးလိုက်ပါ့မလား၊၀တ်လို့သင့်တော်ပါ့မလား စသဖြင့် Shopping ထွက်တိုင်း တွေးမိနေတဲ့ ဒီလိုအတွေးကို တခါတရံမှာ မေ့ဖျောက်ထားပေးပါ။တခါတလေမှာတော့ အသက်အရွယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးက ဖက်ရှင်ကျ သူတစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲရာမှာ အနှောင့်အယှက် အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Source: Shwe Mom
Myanmar Textile and Garment Directory
အမိုက်စားဆံပင်ပုံစံတွေကို မြင်တွေ့ရမဲ့ Alternative Hair Show
ဒီဇိုင်နာ ပြည်စိုးအောင်ရဲ့ လက်ရာဒီဇိုင်များ
top ten စာရင်းဝင် နာမည်ကြီးfashion brand (၁၀)မျိုး
Copyright © 2018 Myanmar Textiles Garment Directory. All Rights Reserved.